Energy and wave | Green Renewables
Simba rekuzunguza kana simba remafungu
Daniel Palomino | | Wave Simba, General, Environment
Mafungu egungwa ane huwandu hwesimba inotorwa kubva kumhepo, kuitira kuti pamusoro pegungwa paonekwe se mukuru muteresi wemhepo simba.
Kune rumwe rutivi, makungwa anotora huwandu hwesimba rezuva, iyo inobatsirawo kufamba kwemafungu egungwa nemafungu.
Mafungu mafungu esimba inogadzirwa, sezvandambotaura, nemhepo uye kupisa kwezuva, izvo zvinoparadzirwa nepamusoro penzvimbo yegungwa uye ine kufamba kwakamira uye kwakatwasuka kwemamorekuru emvura.
Mvura iri padyo nepadenga haingofamba chete kubva kumusoro kusvika pasi, pamwe nekupfuura kwechisimba (chikamu chayo chepamusoro, chinowanzoitwa furo) uye sinus (chikamu chakadzika kwazvo chefungu), asi, zvinyoro kuzvimba, zvakare inofamba ichienda kumberi kwechidzungu uye kumashure muchipfuva.
Mamorekuru ega ega ane kufamba kwakatenderera, achikwira panosvika chiuno, woenda kumberi necrest, pasi kana yasara kumashure, uye kumashure mukati mefungu.
Aya mafungu esimba pamusoro pemakungwa, mafungu, anogona kufamba mamirioni emakiromita uye mune dzimwe nzvimbo, seNorth Atlantic, huwandu hwesimba rakachengetwa hunogona kusvika ku10 KW yemakiromita mita egungwa, iyo inomiririra huwandu hukuru kana iwe uchifunga nezve saizi yegungwa pamusoro.
Idzo nzvimbo dzegungwa ine yakanyanya kuwanda simba akaunganidzwa mumafungu idunhu idzo dziri mhiri kwe 30º latitude nekumaodzanyemba, kana mhepo dzanyanya.
Mumufananidzo unotevera unogona kuona kuti kureba kwemafungu kunosiyana sei zvichienderana nepasi pegungwa zvichienderana nemaitiro ayo epasi.
1 Kusunga wave simba
2 Onshore wave simba magetsi
3 Kushandiswa kwemafambiro ekufambisa
3.1 Cockerell's raft
3.2 Dhadha raSalter
3.4 Yunivhesiti yeBristol humburumbira
4 Kushandisa kwakananga kwekufamba kwemafungu
5 Zvakanakira nekukanganisa kwesimba simba
Kusunga wave simba
Rudzi rwetekinoroji urwu rwakatanga kushandirwa nekuitwa muma1980, uye rwave kugamuchirwa kukuru, nekuda kwaro hunovandudzwa hunhu, uye kugona kwayo kukuru kuita munguva pfupi iri kutevera.
Kuitwa kwaro kunovawo kwakanyanya kushanda pakati penzvimbo 40 ° uye 60 ° nekuda kwehunhu hwemasaisai.
Nechikonzero chimwe chete ichi, kuyedzwa kwakaitwa kwenguva yakareba kushandura mafambiro ekumira uye akatwasuka emasaisai kuita simba rinogona kushandiswa nevanhu, kazhinji simba remhepo, kunyange mapurojekiti akaitwawo kuti achinje kuita kwechimakanika kufamba.
Kupayona chirongwa muCanary Islands
Kune akasiyana akasiyana magadzirirwo akagadzirirwa zvinangwa zvakadaro, izvo zvinogona kuwanikwa mukati mahombekombe, pamakungwa makuru kana kunyudzwa mugungwa.
Parizvino, simba iri rave kuitwa mune zhinji dzenyika dzakabudirira, nokudaro zvichiwana mabhenefiti akakura kuhupfumi hwenyika dzataurwa, izvi zvinokonzereswa ne huwandu hwesimba remagetsi hunopihwa zvine chekuita nesimba rese rinodiwa pagore.
MuUnited States inofungidzirwa kuti kutenderedza 55 TWh pagore zvinotsiviwa nesimba kubva mukufamba kwemasaisai. Iko kukosha i14% yehuwandu hwesimba kukosha uko nyika inoda pagore.
Uye mukati Europe zvinozivikanwa kuti kumativi 280 TWh Ivo vanouya kubva pasimba rinogadzirwa nekufamba kwemasaisai mugore.
Onshore wave simba magetsi
Munzvimbo uko mhepo yekutengesa (Iyi mhepo inovhuvhuta nguva zhinji muzhizha, kuchamhembe kwenyika, uye zvishoma munguva yechando. Dzinotenderera pakati penzvimbo dzinopisa, kubva kuhupamhi 30-35º kuenda kuequator. Dzinotungamirwa kubva kumanikidziro epamusoro-soro epasi pevhu, yakananga kudzvinyiriro yakaderera yequatorial. kufamba kumafungu, iwe unogona kuvaka dura rine rusvingo runotsvedza yekongiri yakatarisana negungwa, panogona kufamba masaisai kuti aunganidze mudura riri pakati pe 1,5 ne 2 metres pamusoro pegungwa.
Mvura iyi inogona kumanikidzwa, ichibvumira kuti idzokere kugungwa, kuti ibudise magetsi.
Kumuka nekudonha kwemasaisai, mune dzimwe nzvimbo uko tekinoroji iyi ichizoshanda, idiki kwazvo, saka haizounze chero chipingaidzo.
Munzvimbo dzemahombekombe egungwa uko masaisai ane simba rakawanda rakaunganidzwa, mafungu anogona kutungamirwa nezvidhina zvekongiri zvakasungirirwa mugungwa rakavhurika, izvo zvinogona simbisa rinenge simba rese remafungu ekumberi makiromita gumi munzvimbo yakapfava 10 metres yakafara.
Mafungu mune ino kesi angave nehurefu hwemamita gumi nemashanu kusvika makumi matatu kana achifamba akananga kumahombekombe, saka mvura inogona kuunganidzwa nyore nyore mudura riri pane imwe nhanho.
Nekuregedzera mvura iyi mugungwa, magetsi anogona kugadzirwa uchishandisa zvakajairika magetsi emagetsi.
Kushandiswa kwemafambiro ekufambisa
Kune akasiyana madhijitari erudzi urwu.
Mumufananidzo unotevera unogona kuona imwe yakamboshandiswa uye yakapa mhedzisiro inogutsa.
Iyo sisitimu yekubatisa simba remagetsi rine mashandiro ari nyore uye rine zvinotevera:
Masaisai achikwira inovaka mweya kumanikidza mukati mechimiro chakavharwa. Chaizvoizvo zvakafanana sekunge tinodzvanya sirinji.
Mavharuvhu "anomanikidza" mweya kuti upfuure neinjini kuitira kuti itendeuke ifambe jenareta, ichigadzira simba remagetsi.
Kana fungu richienda pasi rinogadzira kushushikana mumhepo.
Iwo mavhavha zvakare "anomanikidza" mweya kuti upfuure neiyo turbine munzira imwechete senge yapfuura kesi, iyo turbine inotangazve kutenderera kwayo, inofambisa iyo jenareta uye inoramba ichiburitsa magetsi.
Pfungwa imwechete iyi yakashandiswa mu Kaimei chikepe inofambiswa neyakaomeswa mhepo turbine, chirongwa chakabatana chehurumende yeJapan uye neInternational Energy Agency.
Mhedzisiro yeiyi purojekiti yaiburitsa kwazvo, kunyangwe iko kushandiswa kwayo kusati kwapararira.
Iyo imwechete tekinoroji ichangobva kushandiswa, asi kushandisa kongiri huru dzinoyangarara, muchirongwa chakavakwa muScotland.
Pane zvimwe zvishandiso zvakare shandura kumusoro uye pasi kufamba yemafungu ekugadzira magetsi akadai se:
Mudziyo uyu unosanganisira cheti inotaurwa inokombama nekufamba kwemasaisai, nokudaro ichishandisa mukana wekufambisa pombi yemagetsi.
Imwe inozivikanwa zviri nani idhori reSalter, iro rinoumbwa nhevedzano inoteedzana yemitumbi yakaita seyval iyo inofamba ichichinjana kuenda kumberi nekumashure, kana "ichirohwa" nemafungu.
Iyo Lancaste University airbagr
Iyo airbag inoumbwa nemamita zana nemakumi masere akasimbiswa yerabha repombi chubhu. Mafungu paanosimuka nekudonha, mweya unodhonzwa muzvikamu zvehombodo kutyaira turbine.
Yunivhesiti yeBristol humburumbira
Iyi humburumbira ine kumisikidzwa kwakafanana nekwebhari rakaiswa parutivi rwayo rinoyangarara pakarepo pasi pechiso. Bhari inotenderera nekufamba kwemasaisai, ichikwevera ngetani dzakabatana nemapombi e hydraulic ari pasi pegungwa.
Kushandisa kwakananga kwekufamba kwemafungu
Wakaedzwa mamwe masisitimu ekushandisa zvakananga kukwira nekudzika kwemafungu.
Mumwe wavo, zvichibva pakufamba kwema dolphin nema whale, unogona kuzviona mumufananidzo uyu.
Nheyo yekushanda iri nyore uye inosanganisira zvinotevera:
Kana masaisai achisimuka nekusundidzira fini, inogona kufamba pakati pegumi kusvika gumi neshanu.
Tevere, iyo fin inosvika kumagumo ekufamba uye wave ichienderera ichikwira, pano pane kumusoro kukanda neiyo wave iyo iyo fin inoshanduka kuita pusheni kumashure.
Gare gare, kana masaisai achidzika, anofambisa iyo yekumusoro pasi uye izvo zvakafanana zvinoitika senge mune yakapfuura kesi.
Kana chikepe chiine masystem erudzi urwu, chinofambiswa nemasaisai pasina kushandisa kamwe kadiki simba.
Kuyedzwa kwekuyedza kweiyi system kwave kunogutsa, kunyangwe sezvakaitika mune yapfuura kesi, mashandisirwo ayo haana kuve akaitwawo.
Zvakanakira nekukanganisa kwesimba simba
Wave simba rine zvakanaka zvakanaka akadai se:
Iyo sosi ye renewable energy uye hazviperi pamwero wevanhu.
Mamiriro ayo ezvakatipoteredza anenge asiri nil, kana isu kunze kwemaitiro ekuunganidza simba remasaisa pasi.
Nzvimbo zhinji dzemahombekombe dzinogona kuva inosanganisirwa muzvivakwa zvechiteshi kana imwe mhando.
Wakatarisana nezvakanaka izvi Zvimwe zvinokanganisa, zvimwe zvakakosha ndeizvi:
Kuunganidza masisitimu simba remhepo pavhu rinogona kuva rakasimba kukanganisa kwezvakatipoteredza.
Zvinenge zvinoshandiswa chete munyika dzakasimukira, nekuti inovhuvhuta zvakanaka hurumende haiwanzo kuwanikwa muTatu Nyika; Simba remagetsi rinoda mari yepamusoro yekudyara uye hwaro hwakasimukira hwetekinoroji iyo nyika dzine hurombo dzisina.
Wave simba kana mafungu haigone kufanotaurwa chaizvo, nekuti mafungu anoenderana nemamiriro ekunze.
Vakawanda ve zvishandiso ataurwa vachiri nezvisina kushanda uye ivo vakatarisana nematambudziko akaomarara ehunyanzvi.
Mahofisi egungwa ane hukuru hwekuona.
Munzvimbo dzekumahombekombe zviri chaizvo yakaoma kuendesa simba rakagadzirwa kune mainland.
Zvivakwa zvinofanirwa kumira zvakanyanya zvakanyanya mamiriro kwenguva refu yenguva.
Mafungu ane torque yakakura uye yakaderera angular kumhanya, iyo inofanirwa kushandurwa kuita yakaderera torque uye yakakwira angular kumhanya, inoshandiswa mune angangoita ese michina. Maitiro aya ane kuita kwakaderera kwazvo, uchishandisa matekinoroji azvino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Wave Simba » Simba rekuzunguza kana simba remafungu
Ramangwana re simba, chii chakatimirira?
Iyo hofori dzvinyu iri kutsakatika muCanary Islands